मिस इन्डिया टप १० ‘समर... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
मिस इन्डिया टप १० ‘समर लभ’की हिरोइन
नेपाली युवाहरू माझ 'वेस्ट सेलर' बनेको सुबिन भट्टराई लिखित प्रेम उपन्यास 'समर लभ' सिनेमाका रूपमा पर्दामा रूपान्तरण भइसकेको छ। उपन्यासकी 'साया' पात्र खोज्न निर्माण टोलीलाई कठिन भयो। खोज्दै जाँदा 'साया' आसाममा भेटिइन्। आसामको सानो सहरबाट 'मिस ईन्डिया' को मञ्च हुँदै मुम्बईमा बसेर आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाइरहेकी रेवती क्षेत्रीमा निर्देशक मुस्कान ढकालले 'अतितकी साया' देखे। सिनेमाको प्रस्ताव गरे। रेवती 'साया' बन्न तयार भइन्।
बैंकको जागिरे वा 'ल' को पढाइसकेर केहि गर्ने सोचेकी रेवतीलाई 'बेस्ट सेलर'को एउटा पात्र बनाउन पाउँदा उत्साह र चुनौती दुबै एकसाथ आए।
भन्छिन्, 'सानो सहरबाट ठूलो मञ्चको मिस इण्डियामा त आफूलाई प्रमाणित गरें। सिनेमाको प्रस्ताव आउँदा अवसर र चुनौती दुबै एकसाथ देखें। चुनौती आउँदा एउटा कलाकारलाई रमाइलो पनि लाग्छ। त्यसैले साया बन्न तयार भएँ।'
रेवतीमा कन्फिडेन्स भरपुर छ। एउटा आसामी सिनेमामा काम गरिसकेकी पूर्व मिस ईन्डिया'की प्रतियोगी सिनेमामा दर्शकले पढेको 'साया' पाउनुहोस् भन्ने आशा छ।
उनै रेवती सेतोपाटीसँग सिनेमा र आफ्नो बारेमा यस्तो सुनिएकी थिइन।
सिनेमा कसरी आयो?
मुस्कान दाइबाट आएको हो। यहाँ 'साया'को लागि धेरै खोजी भएको रहेछ। दाइले मेरो फोटो देखेर मनपराउनु भएर कुरा अगाडी बढेको हो।
सिनेमा आउने प्लान थियो की थिएन?
इन्डियामा विज्ञापन, रिजनल सिनेमा तथा म्यूजिक भिडियो गरेको थिएँ। नेपालमा पनि काम गर्न मनचाँहि थियो तर यसरी अफर आएर सिनेमा नै खेल्छु भनेर सोचेकोचाँहि थिइन।
एउटा चर्चित बेस्ट सेलरमाथि सिनेमा बन्न लागेको भन्ने थाहा पाउँदा के लाग्यो?
एकदमै उत्साहित थिएँ। अनि पाठकको मनमा बसिसकेको हिट पात्रमा आफूलाई फिट गराउने चुनौती पनि महशुस गरें। एक्टरको रूपमा चुनौतीपूर्ण काम गर्न रमाइलो लाग्ने रहेछ । थाहा पाएपछि चुनौती हो, भनेर तयारी सुरू गरें।
त्यसको लागि पहिला किताब पढ्नु भयो की स्क्रिप्ट पढ्नुभयो?
किताब अहिलेसम्म पढेको छैन। निर्देशकसँग स्क्रिप्ट मागेको थिएं तर उहाँले यूट्यूबमा अडियो छ भनेपछि अडियो सुनें।
सुनेपछि कस्तो लाग्यो?
किताब पढ्दा अरूको आँखा रसायो, मन भारी भयो भन्ने सुनेको थिएँ, मलाई पनि त्यस्तै भयो। त्यसमा डुबें, मेरा पनि आँखा पनि रसाए अनि मैले यो भूमिका गर्ने निर्णय गरें।
त्यो चरित्रका लागि कस्तो तयारी गर्नुभयो त्यसको त नेपाली परिवेश छ?
इन्डियामा जन्मेकोले यहाँको जस्तो बोली निकाल्नलाई तयारी गरें। अडियो दुईपटक सुनिसकेको थिए, स्क्रिप्ट हातमा परेपछि त्यसलाई प्रत्येक दिन पढें। सुत्नु अगाडी सधै स्क्रिप्ट पढेर सुत्थे।
'साया' पात्रको मनपर्ने कुरा के हो तपाईलाई?
'साया' एउटा बोल्ड र इन्टेलिजेन्ट क्यारेक्टर हो। एउटा केटीलाई यति बलियो गरी देखाएको नै मनपर्‍यो।
'साया'सँग कहिकतैं आफूलाई पनि पाउनुभयो?
पाएँ। भारतका धेरै मानिसलाई थाहा नभएको सानो शहरबाट निस्केर मिस इन्डियाको मञ्चसम्म आफूलाई पुर्‍याएँ। आजसम्म म परिवारबाट टाढा रहेर एउटा आत्मनिर्भर केटीको जीवन बाँचिरहेको छु। त्यसैले कहिकतै 'साया'सँग म मिल्छु।
आसामको सानो शहरबाट मिस इण्डियासम्मको बाटो हिँड्छु भनेर कसरी सुरू गर्नुभयो?
स्कूले जीवनमा म धेरै राम्रो पढ्ने मानिस हो। मेरो साथीहरूले तिम्रो हाइट राम्रो छ, तिमीले मोडलिङमा प्रयास गर्नुपर्छ भनिरहन्थे। मैले ग्र्याजुएसन सकेपछि मोडलिङ सुरू गरें। मैले कोशिस गरौं न भनेर सुरू गरेको थिएँ। धेरै मानिसहरूले मलाई 'मिस इण्डिया' जान सुझाव दिए। सानो शहरबाट 'मिस इण्डिया' जस्तो ठूलो मञ्चमा आफूलाई उभ्याउनु ठूलो काम हो भनेर कोशिस गरेको हो। टप टेनसम्म पुगें पनि।
सानो सहरबाट ठूलो सपना पछ्याउनु आफूमा सजिलो काम होइन, त्यसमाथि बाटो देखाउने कोही नहुँदा सहज पक्कै हुँदैन। त्यो बेलामा केके कुरामा डर थियो?
मिस इण्डियाको फाइनल मुम्बईमा भएको थियो। म कहिले पनि यसरी बाहिर हिँडेको थिइन। मुम्बईमा मैले त्यसअघि चिनेजानेको कोही आफन्त, साथी थिएनन् त्यस्तोमा म कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने त थियो। तर योसँगै मेरो जस्तो ठाउँमा पुग्न, आउन चाहने धेरै केटीहरू छन् र मैले यस्तो प्लेटफर्म पाउँदा छुटाउन हुँदैन भनेर आफूलाई बलियो बनाएर आएँ।
मिस इण्डियामा सहभागी नभएको भए यतिबेला के गरिरहनुभएको हुनेथियो?
म बैकिङ् क्षेत्रमा आउने तयारी गरिरहेको थिए। आसाममा सरकारी जागिर खानुलाई राम्रो मानिन्छ, मैले ल को पढाइ पनि गरिरहेको थिएं। त्यसैले म कि बैकंमा हुन्थे या ल को पढाइ पूरा गरेर अगाडी बढ्थे।
एउटा आसामी सिनेमा गरिसक्नुभएको थियो र बलिउड सिनेमा पनि, त्यता काम गर्ने तरिका र नेपालमा के भिन्नता पाउनुभयो?
त्यो पनि एउटा क्षेत्रिय भाषाको सानो उद्योग हो, उस्तो अगाडी बढेको छैन तर मैले बलिउडमा धेरै मान्छेहरूसँग काम गरिसकेको छु। नेपाल प्राविधिकरूपमा एकदमै राम्रो भइसकेको छ तर इण्डियामा भ्यानिटी भ्यान आदिको सुविधा हुन्छ। आउटडोरमा त्यो नहुँदा एउटा छोरी मान्छेलाई गार्हो हुन्छ। अनि कलाकारलाई आफ्नो पात्रमा काम गर्नलाई एउटा स्पेस चाहिन्छ र त्यो गर्नलाई भ्यानिटी भ्यानले धेरै सजिलो हुन्छ। छुट्टै बसेर, त्यसमा भिज्न, तयारी गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ ३-४ वटा क्यामरा सेटअप हुन्छ जसको कारणले गर्दा टेक ओके भएपछि सकियो तर यहाँ विभिन्न एङ्गलबाट पटक पटक टेक दिनुपर्छ। त्यसमा अलि फरक छ, त्यसका अलावा नेपाली सिनेमा प्राविधिक रूपमा राम्रो छ। थोरै बजेटमा नेपालमा यतिको राम्रो सिनेमा बन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो जुन यहि बजेटमा इण्डियामा गार्हो छ ।
सिनेमा गर्ने निर्णय पहिलो पटक कसलाई सुनाउनुभएको थियो?
मैले घरमा भने। अफर आएपछि नै भनेको थिएँ। हुन्छ गर भनेर भन्नुभयो।
सिनेमा गर्नुभयो, पछि आफ्नो काम हेर्दा कतिको गरें वा गर्न सकें जस्तो लाग्यो?
सेटमा हुँदा 'साया'को रूपमा नै बसिरहेको हुन्थे। मैले पात्र अनुसार गरेको छु लागेको छ मलाई।
निर्देशक कस्तो लाग्यो?
३ महिना त नेपाल बसें। फ्यामिलीजस्तो भइसकें। मलाई काम गर्न एकदमै सजिलो भयो। काम गर्दा हामीसँगै उहाँ फिलमा डुबेर काम गर्नुहुन्थ्यो। हामीलाई कुनै सिन गर्न गार्हो हुँदा क्यामरा पछाडी बसेर हामीलाई यति यसरी रूने भनेर देखाइदिनुहुन्थ्यो। एउटा आर्टिस्टलाई चाहिने वातावरण उहाँले हमेशा तयार गरिदिनुहुन्थ्यो।
तपाईको को-स्टारको डेब्यू सिनेमा हो, तालमेल मिलाउन कति गार्हो सजिलो भयो?
नयाँ भएकाले अलि गार्हो होला की सोचेको थिएँ तर भएन।
सिनेमा हेरेपछि कस्तो प्रतिक्रियाको अपेक्षा छ?
म सिनेमा प्रचारको लागि नेपाल टुरमा गएं,धेरै जनालाई भेटें, भेटेका धेरैले किताबकी 'साया' जस्तै लाग्यो भने। त्यसबाट मैले त्यो पात्रलाई एउटा अनुहार दिनसकें भनेर खुशी लाग्यो।
आगामी दिनमा नेपाली सिनेमा गर्नुहुन्छ?
राम्रो र चुनौतीपूर्ण कामको लागि म तयार छु। 'समर लभ' काम गर्दैगर्दा अफर आएको थियो त्यो बेला मैले यसको नतिजा के हुन्छ हेरेर गर्ने भनेकाले गरिन। अहिले पनि कुराहरू भइरहेको छ। मनपरे गर्छु।
सिनेमाका लागि कतिपटक नेपाल-ईण्डिया गर्नुपर्‍यो?
४-५ पटक गरें।
सिनेमा खेल्दा नेपालको बजेटमा गर्नुहुन्छ की भारतको?
मेरो आधार भारत भएकाले त्यहाँ काम गर्नुपर्छ, बस्नुपर्छ। नेपाल आएर काम गर्दा त्यता धेरै राम्रा कामहरू छुटिरहेको हुन्छ। मलाई कुनै क्यारेक्टर मनपर्‍यो, यसले मलाई करियरमा राम्रो गर्छ भयो भने म गर्छु, पैसामा रोकिन्न। सम्मानजनक पारिश्रमिकमा काम गर्छु।
इण्डियामा एउटा नेपाली अनुहारका लागि सिनेमामा सिमित अवसर हुन्छ। त्यस्तो कुरालाई कसरी सोच्नुहुन्छ?
म नियतीमा विश्वास गर्छु, त्यसैले मुम्बई बसेर काम गरिरहेको छु। मलाई ममाथि मुम्बईमा अगाडी बढ्न सक्ने पूरा विश्वास छ।
एक्सन सिनेमा गर्ने एकदमै चाहना छ। मलाई एक्सन भूमिका गर्न मन छ।
नेपाली सिनेमालाई कतिको फलो गर्न थाल्नुभएको छ?
इण्डियामा नेपाली सिनेमा रिलिज हुँदैन। यूट्यूबमा आउनेबेलासम्म कुर्नपर्ने भएकाले त्यस्तरी फलो गर्न पाएको छैन। मौका हुँदा हेर्छु। स्कूल पढ्दा नेपाल वान च्यानलमा नेपाली सिनेमा आउँथ्यो। त्योचाहि सँधैजसो हेर्थे। सिनेमाको सुटिङको बेलामा 'छक्का पञ्जा २' हेरें। मलाई मनपर्‍यो।
कोही नेपाली अभिनेतासँग काम गर्न मन छ?
मैले त्यस्तरी नेपाली सिनेमालाई फलो गर्न पाएको छैन। अहिले थुप्रै नयाँ अनुहारहरू आइरहनुभएको छ भन्नेचाँहि थाहा छ। मलाई रोल मनपर्‍यो, कुरा मिल्यो भने जोकोहीसँग काम गर्न तयार छु।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २५, २०७५, ०३:२८:००